Liin keega subagga caanaha liimiga ah + qaboobaha farmaajada kareemka - Keega
Tani keega buluugga ah waa sida mooyee keeg kale oo aad dhadhamisay. Keegga liinta wuxuu leeyahay jilicsanaan, jilicsan oo jilicsan oo jilicsan iyo dhadhan dabiici ah oo liin dabiici ah kaas oo lagu dheellitiray kuwa buluugga ah ee macaan. Jilicsan oo dhagan farmaajo barafoobay taasi waa mid adag oo ku filan in la barafeeyo keega laakiin aan aad u macaaneyn ayaa ka dhigeysa tan mid ka mid ah dhadhanka keega ee aan jeclahay xagaaga.
Ninkayga had iyo jeer wuu jeclaa kuwaygayga keega liinta oo muddo sannado ah waxay ahayd dhadhanka keegga arooska ee ugu caansan ka dib keega vanilj . Dhawaan waxaan ku jeclaaday isticmaalka subagga caanaheeyda ku jira cuntadeyda keegga markasta oo ay suurtagal tahay. Marka waxaan cusbooneysiiyay macmacaankeyga liinta ee aan jeclahay si aan u isticmaalo caano subag ka dibna mar labaad ayaan u xardhay si aan u sameeyo keeg miro buluug ah oo dhadhan fiican leh!
Waxaan aad ugu riyaaqay tijaabinta dhadhanka keeggan. Been ma sheegi doono.
Maaddooyinka keega buluugga ah
Kani waa kan ugu fiican liin dhanaanta miraha buluugga ah! Sirta ku jirta keega qalafsan, keega jilicsan ayaa isticmaalaya burka keegga (daqiiq yar oo borotiin ah), caano subag iyo habka kareemka soo noqnoqda.
Ha u dhicin 'khiyaamada kaliya ku dar daqiiqda galleyda ah'. Uma shaqeynayo qashinkan. Keeggaagu wuxuu u ekaan doonaa oo u dhadhamin doonaa sida rootida hadhuudhka.
Talo-siinin - Haddii aad ku sugan tahay Boqortooyada Midowday ka raadso Shipton mills keega jilicsan iyo burka cajiinka ama daqiiqda oo leh heer borotiin ah 9% ama ka yar.
Liin-buluug keega tallaabo-tallaabo ah
Tallaabada 1 - Cabir caano-maalmeedkaaga. Ka soo saar 4 wiqiyadood oo ku rid weel cabbir ah oo gaar ah. Ku dar saliida. Haddii aad laba jibaarto cuntadan, xusuuso inaad labanlaabto qaddarkan sidoo kale.
Tallaabada 2 - Caanaha haray, ku dar ukunta, liinta laga soosaaray, liin dhanaanta, iyo liin dhanaanta. Si tartiib ah u afuuf si aad ukunta u jebiso.
Tallaabada 3 - Ku dar bur, sonkor, soodhaha, budada dubista iyo milixda saxanka isku darka miiskaaga oo ku lifaaqan lifaaqa suufka.
Tallaabada 4 - Waxaad ku dartaa subaggaaga jilicsan ee guntimaha ah adigoo iskuleynaya hooseeya. Isku qas wax walba ilaa ay umuuqdaan sida ciid aan dhab ahayn.
Tallaabada 5 - Hadda ku dar caanaha / saliidda isku dar ah isla markiiba oo ku soo bood xawaaraha ilaa 4 oo isku qas laba daqiiqo oo buuxa si aad u horumariso qaababka keega. Dhimashadu waxay noqon doontaa mid khafiif ah, cad oo aan u muuqan doonin ama jaban.
Tallaabada 6 - Hada ku dar 1/3 caanahaaga / ukunta isku dar inta aad isku dhex dardarayso. U oggolow in ay si buuxda isku dhex gasho ka dibna ku dar kala badh inta hartay ee dareeraha ah. U oggolow inuu isku dhex jiro ka dibna ku dar xaddiga ugu dambeeya ee dareeraha ah. Isku qas ilaa inta laga dhex darayo.
Tallaabada 7 - U kala qaad baydh laba weel oo lagu diyaariyey keega goop ama sii daayo digsiga aad doorbidayso. Caymiska dheeraadka ah, waxaad ku ridi kartaa warqadda soo-baxda hoosta digsiga.
cuntooyinka keega vaniljga qoyan ka soo xoq
Tallaabada 8 - Sidee looga joojiyaa miraha buluuga inay quusaan
Ma ahayn wax sidaas u adag in la geeyo keega liinta meel aan ku faraxsanaa laakiin buluugga ayaa ahaa dhibaato dhab ah! Waxay kusii siqayeen salka hoose! Si aad uga hortagto dhibaatadan waxaan kuu hayaa laba xeeladood si aad uga ilaaliso midhahaas miisaanka lihi inay hoos u degaan salkaaga keega.
Ku dhaq mirahaaga buluuga ah ka dibna iyaga boodh ku bur . Dahaarka burku wuxuu ka caawiyaa inay ugu hoggaansamaan baytariga keega oo ka ilaaliya inay quusaan. Haddii mirahaaga buluugga ah la qaboojiyey, ka bood tallaabadan
Kalabar mirahaaga buluugga ah ku dul saydh dusha dusha keega oo ha ku dhex darin. Waxay u quustaan ​​si dabiici ah.
Hadda khiyaamada dhabta ah. Ka dib 15 daqiiqo oo dubista ah, ku saydhaa xoogaa buluug ah dusha dusha dushiisa . Haa… inta ay foornada ku karinayso. Waan ogahay inay waalan tahay laakiin waan isku dayay wayna shaqeysay!
Tallaabada 9 - Waxaad ku karisaa 350 forF illaa 15 daqiiqo ka dibna ku dul saydhaa miraha buluugga ah ee haray dusha dusha dabka. Sii wad dubista 10-15 daqiiqo oo kale ama ilaa cadayga uu ka soo baxayo isagoo nadiif ah oo bartamaha keega uu ka soo baxayo markii aad riixdo.
Tallaabada 10 - Keegga keega ka fogee foornada oo dhig dhig qaboojiyaha qaboojiyaha. U daa in ay qaboojiyaan illaa ay weelku si dirqi ah u kululaanayaan. Ha u oggolaan inay qaboobaan haddii kale way ku dhegi doonaan.
Tallaabada 11 - Keega ka dib markay qabow yihiin, ku soo tuur sagxadda qaboojiyaha si aad si buuxda u qaboojiso. Kadibna waxaan ku duuduubaa caag balaastik ah, waxaan galiyaa qaboojiyaha ama qaboojiyaha 30 daqiiqo si keega uu u adkeeyo sidaa darteed way fududahay in la maareeyo ka hor inta aanan dhaxan.
Tallaabada 12 - Ku dhalaali keegagaaga la qaboojiyey ee farmaajada barafka ka dhalaalaya, ku qurxiso buluug badan iyo cunnooyin dabiici ah haddii aad jeceshahay!
Waxaan sidoo kale ku daray liin runtii aad u dhuuban oo la jarjaray dhinaceeda keega waxayna u muuqdaan kuwo runtii aad u qurux badan. Hubso inaad sidoo kale ka saarto abuurka.
Kareemka Cheese Classic Qaboojinta
Runtii waxaan isku dayay liin dhanaanta keega liin dhanaanta leh dhaxan yar oo kala duwan sida tayda fudud buttercream iyo kareemka la adkeeyay .
Laakiin waxaan dareemayaa in ammaanta saxda ah ee keegani ay tahay qaboojiyaha farmaajada caadiga ah. Dhadhanka dhadhanka iyo dhadhanka dhadhanka ah ayaa dhadhamiya si la yaab leh liinta miraha buluugga ah ee liinta macaan. Waa ciyaar samada laga sameeyay runti!
Sameynta tan farmaajo barafoobay waa wax fudud. Way ka yara deggan tahay qaboojiyaha farmaajada qaarkood laakiin ma xasilloon tahay sida aan u kariyo kareemkeyga farmaajada qoyaanka. Waa dheelitir labada ah.
Tallaabada 1 - Si aad u barafowdo, subaggaaga dhig baaquli isku-darka mashiinka leh ku dheji lifaaqa (ama isticmaal gacan-ku-qas). Kariimka subagga ilaa inta siman oo aan buro lahayn.
Tallaabada 2 - Waxaad ku dartaa jiiskaaga jilicsan ee jilicsan qaybo yaryar oo isku dar subagga.
Tallaabada 3 - Ka dibna ku dar soo-saarkaaga iyo milixda oo samee! Aad u fudud!
Hubso inaadan xad dhaaf ku qasin jiiska farmaajada qaboojiyaha inkastoo, way kala sooci kartaa haddii aad isku darto muddo aad u dheer.
Cuntadan miraha liin buluugga ah miyuu ku fiican yahay keega?
Haa! Waxaan sameeyay dufcad yar oo tijaabo ah waxaanan ka dhigay liinkan buluugga ah ee keega ah buskud yar oo quruxsan oo lagu kariyey qabow farmaajo. Waxaan buuxiyay liiskeyga buskudka nus buuxa ka dibna ku rusheeyey 3-4 buluug dusheeda.
Kari 350ºF illaa 18-20 daqiiqadood illaa la dejinayo. Ka dib marka la qaboojiyo waxaad ku barafoobi kartaa jiiska farmaajada dhalaalaya oo aad ku sarreyn kartaa xoogaa buluug ah oo cusub iyo liin jeex ah.
Miyaad ku dabooli kartaa keegga jacaylka?
Jawaabtu waa haa! Waad ku daboolan kartaa keeggan gudaha jacayl laakiin ma rabto inaad isticmaasho qaboojiyaha farmaajada. Qaboojiyaha farmaajadu sifiican ugama fiicnaado agtaada, waxay ka dhigeysaa oohin iyo qoyaan.
sida loo xasiliyo kareemka la shiiday kareemka dhalada
Waad ku buuxin kartaa keeg leh jiis kareem leh oo leh biyo xireen caadi ah fudud buttercream inuu ku haysto gudaha oo uu ku qaboojiyo banaanka. Kaliya xusuusnow in qaboojinta farmaajada ay ku jiri karto heerkulka qolka 2-3 saacadood laakiin waa in la qaboojiyaa intaas ka dib.
Keega miraha liinta
Liin keega curdanka ah
Keeg strawberry cusub
Marabtaa inaad barato aasaasiga ah sameynta keeggaagii ugu horreeyay ? Baro sida halkan!
Keeg liin qoyan iyo jilicsan oo leh miro buluug casiir leh iyo jiis baraf ah oo qabow leh! Caanaha subagga ee keeggan keegga ah ayaa ka dhigaya keegga liinta mid aad u jilicsan. Macmacaanka ugu fiican ee xagaaga BBQ! Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:35 daqiiqado Wadarta Waqtiga:Afar. Shan daqiiqado Kalori:432kcal
Liin Bakeeriga Buttermilk Cake ka Show Sugar Geek on Vimeo .
Liin dhanaan Blueberry Cake Waxyaabaha ay ka kooban tahay
▢8 oz (226 g) caano subag Ama caano caadi ah oo lagu daray 1 Tbsp oo khal cad ah
▢laba Tbsp (laba Tbsp) liin dhanaan
▢12 oz (369 g) bur keeg
▢kow iyo toban oz (340 g) sonkorta granulated
▢8 oz (226 g) subag aan cusbo lahayn
▢laba Tbsp (laba Tbsp) Burka AP loogu talagalay boodhka buluugga ah
▢laba koobabka (296 g) buluug Waad isticmaali kartaa barafow laakiin ha dhalaalin
▢16 oz (453 g) farmaajo heerkulka qolka
▢8 oz (226 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢1 tsp (1 tsp) liinta laga soosaaray
▢32 oz (907 g) sonkorta budada ah sifeeyey
Kani waa kan ugu fiican liinta miraha buluugga ah maxaa yeelay waxaan isticmaalaa cabbir sidaas ayeyna ku soo baxdaa si hagaagsan Haddii aad u beddelatid koobabka ma ballan qaadi karo natiijooyin wanaagsan Hubso in dhammaan (maaddooyinka qabow) subagga, ukunta, caanuhu yihiin heerkulka qolka ama in yar oo diiran.
Foornada kuleylka ilaa 350º F / 177º C. Diyaarso laba 8 'digsi keeg oo wareegsan oo leh keeg goobeed ama sii daayo digsi kale oo aad doorbideyso.
Cabir caano subag. 4 oz ku rid koob cabbir gooni ah. Saliida ku dar 4oz oo caano caano ah oo meel dhig.
Caanaha haray, ku dar ukuntaada, liinta laga soosaaray, liin dhanaanta iyo liin dhanaanta oo si tartiib ah u dhuuq si aad isugu darto. Dhinac iska dhig.
Mashiinka ku wareeji xawaaraha ugu hooseeya (dejinaya 1 ku saabsan isku darka Jikada Aid). Si tartiib ah ugu dar qaybo yaryar oo ah subaggaaga jilicsan illaa inta laga wada dhigayo ka dibna wax walboo ha isku darsamaan illaa ay u egyihiin ciid aan dhab ahayn.
Ku dar caanahaaga / saliidaada isku dar ah hal mar walxaha qallalan iskuna qas dhexdhexaadka (xawaaraha 4 ee kitchenaid) 2 daqiiqo oo buuxa si aad u horumariso qaab dhismeedka. Ha welwelin, tani kama badin doonto isku darka keega.
Si tartiib ah ugu dar inta ka hartay walxahaaga dareeraha ah 3 qaybood, adoo joojinaya inaad ku xoqdo baaquli hal mar oo dhexda ah. Foornadaadu waa inay ahaataa mid qaro weyn oo aan diirranayn.
Ku buuxi weelkaaga 1/2 buuxa dheriga doolshada. Sii digsiga xoogaa tuubbo dhinac kasta ah si aad iskaga dhigto baytarka oo aad uga takhalusto wixii naqas ah ee hawo ah.
Ku dhaq mirahaaga (haddii ay cusub yihiin) kuna tuur bur. Haddii berry barafaysan ka bood maydh oo kaliya ku tuur bur. Kalabar nambarka buluuga ah ku daadi dusha dushaaga. Ha ku kicin iyaga.
Dub ilaa 15-20 daqiiqo ka dib ku saydhaa qeybta labaad ee mirahaaga buluugga ah dusha keegga. Dub ilaa 10-15 daqiiqo oo kale ka dibna hubi midnimo. Haddii keega ay wali runti jiggly yihiin, waxaan ku darayaa 5 daqiiqo oo kale. Waxaan hubiyaa 3dii daqiiqo ee kasta ka dib markaa aan xirmayo ka dibna waa 1 daqiiqo kasta. Keegag ayaa la sameeyaa markii caday la galiyay bartanka uu la soo baxo xoogaa jajab ah.
Keega ka fogee foornada oo sii qasabad dusha ka saaran si ay hawadu u sii deyso ugana hortagto yaraansho badan. U oggolow inay ku qaboojiyaan sariirta qaboojiyaha illaa ay si diirran u kululaanayaan.
Qaboojinta ka dib, dhig santuuqa qaboojiyaha dusha dusha keegga, adigoo mid ka mid ah gacanta saaraya birta qaboojiyaha iyo hal gacan hoostiisa digsiga oo ku rog furka iyo sagxadda qaboojiyaha dusheeda si digsiga uu hadda ugu foorarsado sariirta qaboojinta. Digsiga si taxaddar leh uga saar. Ku celi digsiga kale.
Ka dib marka keega si buuxda loo qaboojiyo, si taxaddar leh ugu duub baakadaha balaastigga ah oo dhig dhig qaboojiyaha ama qaboojiyaha illaa 30 daqiiqo si loo adkeeyo keega loona fududeeyo la qabsiga keydinta.
Ka dib markii keegaaga la qaboojiyo, ka buuxi farmaajadaada barafka qaboojiyaha iyo barafka banaanka. Waxaan ku dhammeeyay keegkeyga xoogaa miro-buluug ah oo cusub iyo caano nadiif ah (oo la cuni karo). Haddii aadan aqoon u lahayn qurxinta keega, iska hubi sida loo sameeyo qoraalkaaga ugu horreeya ee keega!
Tilmaamaha Qaboojinta Farmaajada Farmaajada
Dhex dhig subagga jilicsan ee weelka dhajiskaaga istaagga leh lifaaqa suufka iyo kareemka hoose illaa inta uu ka siman yahay
Dhig farmaajada jilicsan ee baaquli baaquli subagga qaybo yaryar iyo kareem hooseeya illaa ay ka siman yihiin oo la isku darayo
Ku dar sonkorta budada ah ee la sifeeyay hal koob markiiba ilaa inta laga qaso
Ku dar soosaarkaaga iyo milixda oo isku dar ilaa intaad ka simanaysid. Ha isku qasin ama dhaxantaadu way kala bixi kartaa
Culeys saar maaddooyinkaaga si aad uga fogaato cilladda keega. Isticmaalidda miisaanka jikada ee dubista waa mid fudud oo wuxuu ku siinayaa natiijooyinka ugu fiican mar kasta.
Hubso in walxahaaga qabow oo dhami ay yihiin heerkulka qolka ama inyar oo diiran (subag, caano, ukumo, si loo abuuro wax isku duuban. Dufanka la dubay ayaa sababa keega inuu dumo.
Majiro caano? Waad awoodaa sameyso caano subag adiga kuu gaar ah
Si looga hortago buluuga inay quusaan, waan dhaqaa (si aan u qoyo) ka dibna waxaan ugu rogaa bur. Kadibna waxaan ku daraa baytarka kalabadh dubista
Ha ku dhicin 'kaliya ku dar galleyda si bur caadi ah'. Uma shaqeynayo qashinkan. Keeggaagu wuxuu u ekaan doonaa oo u dhadhamin doonaa sida rootida hadhuudhka. Haddii aadan heli karin burka keegga ah, isticmaal burka la dubo oo aan u jilicsanayn sida kan rootiga laakin waa ka fiican yahay ujeeddada oo dhan.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:432kcal(22%)|Kaarboohaydraytyada:kontong(17%)|Protein:6g(12%)|Dufan:24g(37%)|Dufan Dufan:shan iyo tobang(75%)|Kalastarol:62mg(kow iyo labaatan%)|Sodium:254mg(kow iyo toban%)|Kalibaalium:84mg(laba%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:38g(42%)|Vitamin A:680IU(14%)|Vitamin C:0.7mg(1%)|Kaalshiyamka:41mg(4%)|Bir:0.6mg(3%)
keega buluugga leh jiiska kareemka kareemka
sida loo sameeyo keeg duudduuban
sida loo sameeyo icdue icdue for keega